Uchitha ixesha elininzi ulawula idatha kunentengiso | Martech Zone
NgoMvulo, Aprili 17, 2017 NgoLwesithathu, nge-27 kaJanuwari 2021 Douglas Karr
Izolo, ndiye ndabelana nabanye ngendlela esilayishe ngayo i-batch unyaka wonke wohlaziyo lwentlalo. Ngelixa umsebenzi omninzi uye kuphando, iqela lethu lichithe iiyure ezimbalwa liphulula idatha kwaye liyenza ifayile enokulayishwa. Kwanasemva kokuba sidlulisile konke ukukhangela okuqinisekisiweyo, kuye kwafuneka ukuba sigqithe ngesandla kwaye sikhethe okanye songeze imithombo yeendaba ukubonisa kuhlaziyo ngalunye lwasentlalweni. Kuthathe iiyure ezininzi ukuyilungisa kwaye ichanekile.
Namhlanje, ixesha lam ndichithe ndithatha amaxesha ambalwa emisitho kwaye ndingenisa kwindawo yeWordPress yomthengi enenkqubo ehlanganisiweyo yolawulo lomnyhadala. Ngelishwa, ngaphandle kwazo zonke iintsimbi kunye neempempe ezibandakanyiweyo nenkqubo, ibisathembele emntwini ohleli phambi kwekhibhodi egcwalisa inkcukacha nganye yesiqhelo kwaye egcwalisa uhlobo ngalunye lwesithuba somcimbi. Ithathe yonke imini.
Kuyo yomibini le mizekelo, idatha yayifumaneka kwaye ifomathiwe kwiifayile zedatha ezinokusetyenziswa. Kule meko, zombini iifayile zecatshulwa ezisekwe kumaxabiso ezahlulwe ngekoma. Nangona kunjalo, omabini amaqonga eMartech ayenemida emandla ekufakweni kwedatha. Amaxesha ngamaxesha, le yingxaki ngeMartech. Sinazo zonke izixhobo ezikhoyo zokwenza amaphulo anempembelelo, kodwa amaxesha amaninzi sifumana ukungenisa okungahambelaniyo okanye okungekhoyo kubuchule bokungenisa kunye nokudibanisa.
Andindedwa ekukhathazekeni kwam. Kuphononongo lwakutsha nje olwenziwe ngu IBhunga loShishino lweMartechUbudlelwane bothando / inzondo kunye noMartech buvela kubathengisi.
Ngokungafaniyo noogxa babo be-B2C, abathengisi be-B2B banedatha engaphezulu kunangaphambili, kodwa abanakho ukuyisebenzisa ukuze bazi abathengi babo ngendlela eya kubanceda ukuba bathengise ngokufanelekileyo.
UDoug Bewsher, Indawo yokukhokela CEO
I-85% yabathengisi bathi babenjalo ukuchitha ixesha elininzi kunanini na ngaphambili ulawula itekhnoloji yentengiso, e indleko Ukuchitha ixesha lokuthengisa ngcono kunye nokuzibandakanya nabathengi.
I-98% yabathengisi bathe ufuna ulwazi ngakumbi malunga nabantu kunye neenkampani kwindawo yolwazi.
I-60% yabathengisi ibicela i ukuqonda okuchanekileyo yomthengi persona kunye nomntu ekulindeleke ukuba athenge.
Ngaphezulu kwe-75% yabathengisi kuvavanyo bathi banokukhetha chitha ixesha elininzi Ukuphuhlisa nokwazisa amaphulo amatsha kwaye yi-11% kuphela ethe bafuna ukuchitha iintsuku zabo zomsebenzi ukulawula ugcino lwedatha.
Ngelixa abathengisi kuvavanyiwe besithi bayazi ukulawula idatha zabo kubaluleke kakhulu kwimpumelelo, uninzi lwabo luye lwavuma ukuba bachitha ixesha elincinci kangangoko kunokwenzeka ukujongana nayo. Abathengisi bafuna indlela yokwenza idatha kunye nenkqubo yokuqokelelwa kweengqondi kwaye bayisebenzise ukwenza iinjongo zabo eziphambili-ezichongiweyo kuphando njengokuxhasa ukuthengisa ngokuvelisa izikhokelo ezifanelekileyo.
Malunga neNdawo yokuKhokela:
Iqonga lokuLawula abaphulaphuli yenza ukuba iinkampani ze-B2B zibandakanye abathengi ngcono kwaye ziqhube ukukhula ngokukhawuleza ngokuvumela abathengisi ukuba bafumane kwaye babazi abaphulaphuli babo. Njengoko idatha yangaphakathi neyangaphandle iphindaphindeka, iLadspace isebenzisa i-AI ukubonelela ngomthombo omnye wenyaniso kuyo yonke idatha yokuthengisa kunye nentengiso, ichonge iiakhawunti ezintsha kunye nabantu, kwaye bacebise eyona misebenzi intengiso. Ukuhlaziywa ngexesha lokwenyani, idatha kunye nobukrelekrele buhlala buchanekile kwaye busebenza kwaye bunokusetyenziselwa ukuthengisa, ukuthengisa kunye neendlela zentengiso.
tags: Iinkcukachaekhokelelauphando lwezentengisoItekhnoloji yentengisomartechIBhunga loShishino lweMartechUphando lweMartech
I-Tasko: Lixesha lokuba ukhuphe imisebenzi yakho yokuthengisa
Epreli 18, 2017 ngo-1: 29 AM
Ukulungisa loo datha akufuneki ukuba kukuthathe imini yonke, kwaye luphawu lokuba usebenza kwimifanekiso emincinci endaweni yemifanekiso emikhulu kunye neshishini lakho. (Ndiyayibona le nto kuba iyandibulala nam.) Ukulungisa loo datha bekufanele ukuba kuthathe iinzame ezimbalwa kwi-fiverr okanye nakubani na ukuyilungiselela umrhumo omncinci ngokuthelekiswa nexesha lakho. Ndibhala oku ukuzikhumbuza. Ubuyazi indlela yokulungisa, omnye umntu wenze lo msebenzi "kuphela" ubaziyo ukuba ubaxelele ukuba benze kwaye ubabhatalele into abayicelileyo, ayingomdlalo weentloni. Ndoyena mntu undishumayezayo. (Ndingasoloko ndiyenza ngcono, okanye ndazi kuphela indlela yokwenza….
Epreli 18, 2017 ngo-10: 57 AM
Meh. Andikholelwa ukuba le yinyani kaKevin. Ngelixa sinokubhengeza umsebenzi wemihla ngemihla, umgangatho kunye nesicwangciso-qhinga asinakukhutshelwa ngaphandle. Nokuba kwimizekelo endiyenzileyo, ukwazi umfanekiso omkhulu kunye nomthengi yeyona nto ibifuna ukuba ndihlele idatha endimele ndiyenze.